विवादमा अल्झिएर चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउने परिस्थिति बनेमा कसैको भलो हुँदैन : डा भगवान कोइराला... [भिडियो वार्ता] | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
त्यसपछि पारदर्शी शुल्क प्रणालीको कुरा छ, यसमा पनि केही विवाद छ। तर, मोटामोटी लागू भएको छ। विदेश जानेको हकमा पनि काउन्सिलले परीक्षा लिने कुरा छ। त्यसैले एक–दुई कुराबाहेक अब एकदमै नयाँ कुरा ऐनमा रहेन। यी सबै कुरालाई ऐनले व्यवस्थित र बलियो बनाउँछ। गुणस्तरमा यसले कतिको नतिजा ल्याउँला? यिनै कुरा इनफोर्स गर्दै जाँदा गुणस्तरमा वृद्धि चाहिँ हुन्छ। तर, ऐन बनाएर मात्रै गुणस्तर बढ्ने होइन। ऐन बनेर, आयोग बनेर मात्र सबै कुरा सल्टिन्छन् भन्ठान्नु चाहिँ असाध्यै ‘नाहिर’ सोच हो । १० मा सहज तरिकाले ५/६ आउला। असहज तरिकाले ८/९ आउँला । तर, कुर्सीको रहरले मात्र जाने व्यक्ति प¥यो भने भएको पनि गुम्ने खतरा रहन्छ। – स्वास्थ्यखबरबाट